now | ZAYYA
ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင် စွာ နေထိုင်ရန် လိုအပ် သည့် အရာ ဟူသည် အခြားမဟုတ် – “အခု”သာ ဖြစ် သည်။ အခု သင် ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင် နေနိုင် ပါသည်။ မနက်ဖြန် အကြောင်း၊ နောက်တစ်နေ့ အကြောင်း ပြောနေ ရန် မလိုအပ်၊ ရွှေ့ဆိုင်းနေစရာ မလိုအပ်။ ပျော်ရွှင်ရန် အရာ အားလုံး သည် ဤခဏ တွင်ပင် တည်ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ယခု သင် အသက် “ရှူ” နေသည်၊ ယခု သင် အသက် “ရှင်” နေ သည်၊ ယခု သင် “အသိ” ရှိ သည်၊ ယခု သင် “သတိ” ရှိသည်။ သို့ဆိုလျှင် ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့နေ ရန် အတွက် – အခြား အဘယ်အကြောင်း များ ထပ်မံ လိုအပ် နေပါသေး သနည်း။ စင်စစ် အခု ခဏတွင်ပင် သင် ကခုန် နိုင်ပါသည်။ အခု ခဏတွင်ပင် သင် သီဆို နေနိုင်သည်။ သို့ဖြင့် သင် သည် ယခု ခဏ၌ပင် ပျော်ရွှင် ရယ်မော နေနိုင် ပါ၏။
ဘဝ သည် လင်းထိန် လှပ နေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်- ယင်းဘဝ သည် ပင် မှောင်မိုက်နေ နိုင်သည်။ ဤသည်တို့သည် ကျနော်တို့ အပေါ် ၌သာ မှီခိုသည်။ ရွေးချယ် သည့် အပေါ်သာ မူတည်သည်။ ထို့နောက်မှ – ဖြစ်နိုင်စွမ်းတို့ အမျိုးမျိုး ကွဲပြား သွားကြသည်။ အမှောင် တွင် နေမည် – အလင်း တွင် နေမည် စသည် သင် မည်သည်ကို ဆုံးဖြတ် ပါမည်နည်း။ ယင်း ဆုံးဖြတ်ချက် တို့သည် – ဘဝရှင် သင်နှင့် သာ ဆိုင်သည်။ အခြား လွှဲချနေစရာ မလိုပေ။
အမှောင် တွင်း နေသော လမ်းသည် – အလိုဆန္ဒ တို့၏ လမ်း ဖြစ်သည်။ အလိုဆန္ဒ တို့၏ လမ်း သည် အစဉ် အမြဲ ပြင်ပ သို့သာ ဦးတည် သည်။ မိမိ သန္တာန်မှာ Read more of this post
Filed under Opinion, Osho Tagged with grace, here, live, now, Osho, Peace
၁။ သင် သည် လမ်းဖြစ်၍ သင်သည်သာ ပန်းတိုင် ဖြစ်၏။ သင်နှင့် ပန်းတိုင် ကြားတွင် မည်သည့် အကွာအဝေး မျှ ခြားနား မနေ။ သင်သည် ရှာဖွေနေ သူ ဖြစ်၍ သင် သည် သာ သင် ရှာဖွေနေ သည့် အရာ ဖြစ်၏။ ရှာဖွေသူ နှင့် အရှာဖွေခံ အကြား တွင် ဘာမျှ ခြားနားခြင်း မရှိ။ သင်သည် ကိုးကွယ် သူ ဖြစ် ၍ သင်သည်သာ အကိုးကွယ် ခံ ဖြစ်၏။ သင်သည် တပည့် တပန်း ဖြစ်၍ သင် သည် သာ ဆရာ သခင် ဖြစ်၏။ သင်သည် သာ နည်းလမ်း၊ သင်သည်သာ အဆုံးသတ် ရလာဒ် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဤ လမ်း ကို ကြီးမြတ်သော လမ်း ဟု ခေါ်ဆို ၏။
၂။ ယင်း လမ်း သည် သင့်အတွက် အစဉ် အမြဲ ပြင်ဆင်ပြီး သား ဖြစ် သည်။ ဤခဏအတွင်းတွင်ပင် တည်ရှိနေ သည်။ နိုးထ လာသည့် အခါတွင်လည်း ရှိ၍ အိပ်ပျော်နေ သည့် အခါ၌ လည်း ရှိသည်။ အိပ်ပျော် နေသည့် အခါ၌ မမြင်တွေ့ ရခြင်း သာ ကွာခြားကောင်း ကွာခြား ပါလိမ့်မည်။ သို့ပါ လျက် နှင့် သင် သည် တမ်းတ နေဆဲ – ရှာဖွေ နေဆဲ ရှိသည်။
၃။ ပုံပမာ အားဖြင့်- ယမကာ မှီဝဲ ထားသည့် သူ နှင့် တူ၏။ မိမိ အိမ်ရှေ့ ရောက်နေ ပါလျက် နှင့် – မိမိ အိမ်ပျောက် နေသည့် အလား ရှာဖွေ နေသူ ဖြစ် သည်။ မိမိ မျက်စိ ရှေ့မှောက်တွင် ရှိနေပါ လျက် နှင့် ကျီးကန်းတောင်းမှောက် ရှာဖွေ နေဆဲ ဖြစ်သည်။ စင်စစ် အရင်း ခံ အကြောင်း သည် ပစ္စည်းကြောင့် မဟုတ်။ ဝေဝါး မှုန်ရီ နေသော သင်၏ အမြင် အာရုံကြောင့် သာ ဖြစ်သည်။ Read more of this post
Filed under Osho Tagged with now, Osho, right, way
Ted Viramont: မတရားမှုကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်သင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား။
Osho: ကျုပ်ဘယ်အရာမှ မယုံဘူး။ ယုံကြည်တယ်၊ မယုံကြည်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးပါနဲ့။ အဲ့စကားဟာ – ကိစ္စရပ် တစ်ခုကို တကယ်လည်း မသိ၊ အတိအကျလည်း လက်ခံ လို တဲ့ အခါမှာ – ရောကြိတ်ပြီး လွှဲသုံး တဲ့ ဝေါဟာရ ဖြစ်ပါတယ်။
Filed under Osho Tagged with belief, facebook, fight, moment, now, Osho, prejudice
အမြင်ကတ်ပုဒ်မ နဲ့လား မသိ- တစ်ယောက်က ဆိုပါတယ်-
Question: “အခုအချိန် အခုနေရာ” (Here and Now) ဆိုတဲ့ စကားကို ခင်ဗျား ခဏခဏ သုံးတယ် ပြောတယ်။ “အခု”ကို ဘယ်လိုသိရမှာလဲ?
Ans: အိုး ! ရှိစုမဲ့စု ဘုရားသခင် ! ခင်ဗျား “အခု” ကို မသိဘူးလား။ ခင်ဗျား အခု ဗိုက်ဆာ နေမယ်- ဒါဆို အခု သိလား။ အခု ခေါင်းကိုက်နေရင်ကော အခု သိလား။ အခု နေထွက်နေရင်ကော ခင်ဗျား သိပါသလား။
အဲ့ဒါတွေကို မသိရင် – “အခု” ကို ဘယ်လို သိရမှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ ~ “အခု”ကို ခင်ဗျား ဘယ်လို တွေးရမှာလဲလို့ မေးတာနဲ့ အတူတူ ဖြစ်နေပါတယ်။ စင်စစ် ခင်ဗျား သိဖို့ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ဟာ – ခင်ဗျား သိဖို့ မဟုတ်ဘဲ ~ တွေးဖို့ တာစူနေတာ သာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အတွေး ဟာ ဘယ်တော့မှ “အခု” တည့်တည့်မှာ မရှိဘူး။ အကြောင်းက- “အတွေး” ဆိုတာ “အခု တည့်တည့်မှာ မနေနိုင်စွမ်း” ကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်။ အတွေး ရှိရင် ခင်ဗျား “ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့်၊ အခု တည့်တည့်” မှာ မရှိဘူး။ ရှိလို့လည်း မရဘူး။ တွေးတယ် – ဆိုကတည်း က – အဲ့ဒီ အတွေး ဟာ အတိတ်နဲ့ အနာဂတ် ကိုသာ တွေးလို့ ရပါတယ်။ “အခု”ကို ဘယ်တော့မှ မတွေးနိုင်ဘူး။ ဒါကို မဟုတ်ပါဘူး လို့ ခင်ဗျား ငြင်းလိုပါသလား ~
အခု ချက်ချင်းပဲ ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့် အပေါ် ခင်ဗျား တွေးကြည့်ပါ။ ခင်ဗျား တွေးတဲ့ အတွေးဟာ “အတိတ်” ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျား များများ တွေးလေ ~ ခင်ဗျား အတွေးဟာ – အတိတ် (ဒါမှ မဟုတ်) အနာဂတ် တစ်ချိန်ချိန် အတွက် ဖြစ်သွားလေပဲ။
ခင်ဗျား အတိတ်မှာ ခင်ဗျား အတွက် မှတ်သားစရာ တွေ၊ ထင်ကျန်ရစ် စရာတွေ၊ အတွေ့ အကြုံ တွေ များများ ရှိနေမယ် ဆိုပါစို့။ ဒါဆို ခင်ဗျား များများ တွေးနိုင်နေပါတယ်။ အလားတူ – ခင်ဗျား အနာဂတ် အတွက် ရှည်ရှည် ဝေးဝေး မျှော်လင့်ချက် ကြီး တွေ ရှိနေမယ်~ မဟာ့ မဟာ စီမံကိန်း ကြီးတွေ ရှိနေမယ် ဆိုပါစို့၊ ဒါဆို ခင်ဗျား များများ တွေးဖြစ်မှာပါပဲ။
ဘာလို့ဆို “အတွေး” အတွက် အချိန် ဆိုတာရဲ့ အညွှန်းဘောင်ဟာ ရှည်နိုင်သမျှ ရှည်ရှည် – လိုကို လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် – အခု “ပစ္စုပ္ပန်” တည့်တည့်အတွက် အချိန် အညွှန်းဘောင် လုံးဝ မလိုဘူး။ ဒါဟာ “အခု” ကို ခင်ဗျား တွေးမရတဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့် အပေါ် ကြည့်တဲ့ ခဏ – အတွေးစိတ်ကူး ဆိုတာ မဝင်ဘူး။ အသိ သက်သက်သာ ရှိတယ်။ အခု တည့်တည့် အပေါ် ခင်ဗျား အသိရှိရှိ နေကြည့်နိုင်တယ်။ ခင်ဗျား ခန္ဓာဟာ အခု တည့်တည့် မှာသာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို “အခု” အပေါ် ကြည့်မှတ် နိုင်တဲ့ ခဏတိုင်း – စိတ်ကူး အတွေးက အလုပ်မလုပ်ဘူး။ အလုပ် မလုပ်နိုင်ဘူး။ အတွေးတွေ အတွက် “အခု တည့်တည့်” မှာ နေရာ မရှိဘူး။
Filed under Osho Tagged with here, meditation, now, thought
~ ဘာဝနာ ၏ ဦးတည်ရာသည်
နက်ရှိုင်းသော အတွင်း သန္တာန်၏ သိမှုဆီသို့
“အတွင်း အနှစ် အချည်းနှီး ဖြစ်လျက် ရှိခြင်း” တည်း ဟူသော
ဘာဝနာမှာ ဘာလိုအပ်သလဲလို့ မေးရင် “Just to watch and not to do anything” စောင့်ကြည့်ရုံကလွဲပြီး ကျန်တာ ဘာမှ မလုပ်ဖို့ ~ အဲ့ဒါပဲ လိုအပ် ပါတယ်။ ဒီစကားဟာ လွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်း နေဟန် ရှိတယ်။ ဒါပေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ လုပ်ကိုင်ရ အခက်ခဲဆုံး အရာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြည့်အဝ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်ပြီး နေထိုင် နိုင်ဖို့ ~ ပစ္စုပ္ပန် တခဏ အတွင်း ဖြစ်လာတဲ့ အရာကို ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ( မိမိ အလို/မိမိ အပြု အမူ မပါ) လက်ခံနိုင်ဖို့ ဆိုတာ နိစ္စဓူဝ လူအများ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းရပ်တွေကြားမှာ ~ မလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက် ပိုပြီး အတွင်း ကျကျ ကြည့်ဖို့ ၊ နီးနီးကပ်ကပ်၊ သတိရှိရှိ ဆက် စောင့်ကြည့်ရဖို့ ဆိုရင် ပိုပြီး ခက်ခဲပါလိမ့် မယ်။ ဘာလို့ဆို ရှင်းလင်းတဲ့ အမြင်နဲ့ နိစ္စဓူဝ လုပ်ကိုင်သမျှ ကြည်လင်နေဖို့ ရာ အတားအဆီး အဖြစ် ~ မိမိတို့ သန္တာန်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သံချေး တက်ခဲ့တဲ့ ~ အယူဝါဒ၊ အသိဥာဏ် ဗဟု သုတ၊ အစွဲအလမ်းပေါင်း များစွာ က အတားအဆီး အဖြစ် ခုခံနေလို့ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
Inner World အတွင်းအဇ္ဈတ္တလောက အတွက် ~ မိမိသဘောနှင့် မိမိ ဘာမှ မလုပ်ခြင်း၊ ဘာမှ မဖြစ်ခြင်း ( Non-doing ) ဟာ အခရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိဒ္ဓ ကမ္ဘာ ( Outer – world ) အတွက် တော့ အဲ့လို မဟုတ်ဘူး။ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် နေရတယ်။ လူတိုင်း နေ့ တိုင်း အားစိုက် ထုတ် လုပ်ကိုင် နေရ ပါတယ်။ တွန်းအား ရှိမှ အရွေ့ ရှိတယ် မဟုတ်လား ~ တစ်ခုလုပ်မှ တစ်ခု ဖြစ်တယ် ~ စသဖြင့်။ အဲ့ဒီ ပြင်ပ ဗဟိဒ္ဓလောက အတိုင်း လိုက်လံ ရှုမှတ် သိမ်းဆည်းရင်း ခင်ဗျားရဲ့ သန္တာန်မှာ ရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက် အလို ဆန္ဒတွေ ဝင်လာ တဲ့ အခါ အပူ ၊ သောက၊ မာန ဝင်ရိုး ထုံးစံ ရှိပါတယ်။ ခင်ဗျား ရင်တွင်းက ရိုးသားမှု လေး ပျောက်သွားတယ်။ ဘာဝနာ က ဒါကို ပြန်လည် တူးဖော် ပေး ပါတယ်။ ခင်ဗျား ရဲ့ သိစိတ်ကို အရှင်းသား မြင်ဖို့ ရိုးရိုး သားသား စောင့်ကြည့်ရုံလေး စောင့်ကြည့် လာစေ ပါ တယ်။
Filed under Osho Tagged with now, Osho
ချမ်းမြေ့မှု သည် သဘာဝ အတိုင်း သာ ဖြစ်၏
A: အခု ရှိနေတာတွေ အားလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။
Osho : ခင်ဗျား ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ( ဝါ ) ခင်ဗျား ရှင်သန်နေထိုင်ရခြင်း အကြောင်းက ဘာလဲ။ ခင်ဗျား ဘဝမှာ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခုများ ထားရှိ ထားပါသလား။ အခု ကျနော်နဲ့ အင်တာဗျူး လုပ်ဖို့လား။
A: ဗျာ !?
Osho: ကျနော်နဲ့ အင်တာဗျူး လုပ်ဖို့ဟာ ခင်ဗျား ဘဝ ရည်မှန်းချက်လား !!!??
စင်စစ် လောကမှာ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက် ဘာမှ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ရှိပါတယ်။
ဘဝ(ဝါ) ရှင်သန်နေခြင်း သက်သက် မှာ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူး။ မလိုအပ်ဘူး။ ချစ်ခြင်း၊ မေတ္တာ မှာ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူး။ အလှတရားမှာ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူး။ ချမ်းမြေ့ခြင်း သန္တိမှာ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူး။ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ်တွေ ခွဲခြား တည်ရှိတဲ့ အရာတွေဟာ စင်စစ် အသုံးမဝင်တဲ့ အလဟဿ ၊ အချည်းနှီး ပျက်စီးရာ အကြောင်းခံ တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ယန္တရား တစ်ခုမှာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိမယ်။ ဒါပေတဲ့ လူသား ဖြစ်ခြင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူး။
ကဲ… ကခုန်တယ် ။ ဘာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ။ ပျော်ရွှင်တယ် ~ သီချင်းဆိုကြတယ် ~ ဘာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ။ ပန်းချီဆွဲတယ် ~ ကဗျာရေးဖွဲ့မယ် ~ ဘာရည်ရွယ်ချက် ရှိပေးရမလဲ။ မိုက်ကယ် အိန်ဂျလို၊ လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ၊ ပီကာဆို ~ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။
တစ်ချိန်က ပီကာဆို ပန်းချီဆွဲနေတဲ့ အခိုက်ပေါ့။ – လူတစ်ယောက် က ကြည့်နေခဲ့တယ်။ နှစ်နာရီလောက် ကြာမယ်။ ပန်းချီကား ဆွဲပြီးတော့ ပီကာဆိုကို အဲ့ဒီ လူက မေးတယ်။ “ခင်ဗျား ဒီပန်းချီကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆွဲသလဲ။ ဒီပန်းချီကားရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ”
ပီကာဆိုက ပြန်ပြောတယ်။ “ကျုပ်လည်း ခင်ဗျားကို မေးမလို့ပါ။ အကြောင်းက ခင်ဗျားလည်း နှစ်နာရီလောက်နီးနီးကို အချိန်ပေး ကြည့်နေခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားများ သိမလားလို့။”
သူပြောတဲ့ စကားဟာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့စကား ၊ မှတ်သားဖွယ်ရာ စကား ဖြစ်ပါတယ်။
နှင်းဆီပန်းလေး တစ်ပွင့်ဆီကို သွားပြီး “မင်း ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ၊ မင်း ဘာအကြောင်းကြောင့် ဖူးပွင့်လာတာလဲ” ဘယ်သူ သွားမေးမလဲ။ နှင်းဆီ ပန်းလေးဟာ လေထဲ၊ မိုးထဲ၊ နေရောင်ခြည် အလင်းတွေ ကြားထဲမှာ သူ့သဘာဝနဲ့ သူ ဖူးပွင့် ကခုန် နေနိုင်ပါတယ်။ သူ့အတွက် ဘယ်မေးခွန်းတွေနဲ့ ဘယ်သူ အနှောင့်အယှက် ပေးနိုင်မလဲ။ အလားတူ ~ ကျနော်ကရော။ ကျနော့် ပန်းချီကား တွေမှာ ဘာရည်ရွယ်ချက် ရှိရမလဲ။ စင်စစ် ကျနော် ပန်းချီဆွဲရတာ ပျော်တယ် ~ ကြည်နူးတယ် ~ ဒါဆို လုံလောက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါထက် ပိုပြီး ဘာမှ မလိုအပ်ဘူး။
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မောင်းနှင်နေတဲ့ ဘဝဟာ ကျွန်တစ်ဦးရဲ့ ဘဝသာ ဖြစ်တယ်။ ရည်မှန်းချက် မရှိ၊ မလိုအပ်တဲ့ ဘဝဟာ ချမ်းမြေ့သာယာနေပါတယ်။ တခဏတိုင်း တခဏတိုင်း အပေါ် အပြည့်အဝ နှစ်လို ချမ်းမြေ့ နေထိုင်တာ သာ ရှိတယ်။ သူအတွက် မနက်ဖြန် မရှိဘူး။ အဆုံးသတ် မလိုဘူး။ အခြား ဘယ်တနေရာရာကိုမှ သွားနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အခု အချိန်၊ အခု နေရာ ( Now and Here ) မှာသာ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း တည်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် အခု ပျော်ရွှင်တယ် ~ ကျနော့ ရောင်းရင်းတွေလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိမယ်။ ဘာထပ် လိုအပ် ပေးရဦးမလဲ။ Read more of this post
Filed under Osho Tagged with here, Interview, now, Osho
လက်ဘက်ရည်ပွဲ ( Tea Time )
ဇင် အတိုင်း နေထိုင်သူ အတွက် အရာ အားလုံးဟာ လေးနက် နေပါတယ်။ ဥပမာ- လက်ဘက်ရည် သောက်တာက အစပေါ့။ သူလုပ်ကိုင် သမျှဟာ မြင့်မြတ်ရာ ကျောင်း ပရဝဏ် အတွင်းထဲ အမြဲ ရောက်နေ သလို ဖြူစင် လေးနက် နေတယ်။
မောရှေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းလေး တစ်ခု ရှိခဲ့တယ်။ ပညတ်တော် ဆယ်ပါးကို နာခံ ယူဖို့ ၊ ဘုရားသခင်နဲ့ တွေ့ဖို့ ဆိုပြီး “ရှီနိုင်း” တောင်ပေါ်ကို သူ ရောက်သွားတော့ အဲ့ဒီမှာ အစိမ်းရောင် ခြုံပုတ်လေး တွေ့ရတယ်။ ပြာရောင်လွင်လွင်လေးနဲ့ အတွင်းမှာ မီးညွန့်လေးကို မြင်ရတယ်။ သူလည်း တအံ့တဩနဲ့ အနားကို တိုးသွားကြည့်တယ်။ ခြုံအတွင်းကနေ တစ်စုံတစ်ယောက်က လှမ်းအော်ပါတယ်။ “ဖိနပ်ချွတ်ခဲ့ပါ။ ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ မြေဖြစ်ပါတယ်” တဲ့။ ဂျူးဘာသာမှာ အဲ့ဒီ ဖြစ်ရပ်ကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားတာက – အဲ့မီးတောက်ကလေးဟာ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့မီးတောက် ကလေးဟာ အေးမြနေတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ မီးတောက်ရှိနေရာ ခြုံပုတ် ကလေး မလောင်ကျွမ်း၊ ပြာမကျ သွား ရတာပဲ ဖြစ်တယ် တဲ့။ မောရှေဟာ အမှတ်မဲ့ ဒီနယ်မြေထဲ ဝင်ရောက် လာပေမယ့် ဒီမြေဟာ အမှတ်မထင်ဘဲ မြင့်မြတ် နေခဲ့တယ်။ ဖြူစင်တဲ့ ကျောင်း ပရဝဏ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရှင်သန် နေတဲ့ ဘုရားသခင် ရှိနေတယ် မဟုတ်လား။ အဲ့တော့ သူ ဖိနပ်ချွတ်ပြီးမှ ဝင်ရတော့တယ်။
ကျနော့ အနေနဲ့ ဆိုရင် ဒါဟာ သမိုင်းဖြစ်ရပ် တစ်ခု လို့ မထင်ဘူး။ ဒီထက် ပိုသာတဲ့ နိမိတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင် ရှိရာ ဘယ်နေရာ ဘယ်မြေပြင် ဖြစ်နေပါစေ အဲ့နေရာဟာ မြင့်မြတ် နေမှာပဲ။ ဇင် မှာ ဒီအချက်ဟာ အပြည့်အဝ ပျံ့နှံ့ စိမ့်ဝင် နေပါတယ်။ အရာအားလုံး ကို ဒီအမြင်နဲ့ ချဉ်းကပ်တယ်။ ဆိုလိုတာက – လေးနက် ဖြူစင်မှု ရှိရာ နေရာ တိုင်းမှာ ဘုရားသခင် ရှိတယ်။ မြင့်မြတ်မှု ရှိရာ နေရာတိုင်း ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ နေရာ ဖြစ်တယ်။ ဇင် အတွက် ဒီသဘောဟာ အပြန်အလှန် မလိုအပ်ဘူး။ ဆိုလိုတာက – ဘုရားသခင် ရှိတဲ့ နေရာ မှာမှ မြင့်မြတ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင် ရှိမှ ဖြူစင် လေးနက် မယ့် နေရာ ဖြစ်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင် တည်ရှိနေမှု က အဲ့နေရာ တစ်ခုကို မြင့်မြတ်အောင် လုပ်လိုက် တာ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားက အလေး အနက် ဖြူစင်စွာ နဲ့ ထားလိုက် တဲ့အခါ မှသာ – လေးနက် မြင့်မြတ်တဲ့ နေရာ ဖြစ်သွားတာ။ ခင်ဗျားက တည်ငြိမ် သန့်စင်သွားတဲ့ အခါမှာမှ ဘုရား တစ်ပါး တည်ရှိနေသလို ရုတ်ချည်း ခံစား လိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇင် အတိုင်း နေထိုင်သူ တွေဟာ မိမိသန္တာန်မှာ လေးနက်သန့်စင်အောင် ထားရင်း အရာအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ပြုမူ တယ်။ အခြား ဘုရားသခင် ဝါဒတွေ မှာ အဲ့ဒါ ရှိပါသလား။
တကယ်စင်စစ် ဇင် မှာ ဘယ် ဘုရားသခင် မှ မရှိဘူး။ ဇင်မှာ တကယ် ရှိတာက ခင်ဗျားနဲ့ ခင်ဗျား ရဲ့ စိတ် ပဲ။ ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်သာ အခုလက်ရှိ အချိန်မှာ အဖွံ့ထွားဆုံး ၊ အပွင့်လန်းဆုံး တည်ရှိနေတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်မက မြင့်မြတ် ပွင့်လန်း သွားနိုင်တယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ လက်ရှိ အခု ဘဝတစ်ခုလုံးကို လေးနက်အောင် ခင်ဗျား ဘာသာပဲ ဖန်ဆင်း နိုင်တယ်။
Filed under Osho, philosophy Tagged with here, monastry, monk, now, now-here, Osho, tea, zen